Uwe kachasị mma na Teen Vogue's Young Hollywood Party: votu ugbu a! - Ụdị
Ndị na-eme ihe nkiri Hollywood na-abịanụ wee pụọ (n'ụzọ dabara adaba afọ!) Maka Teen ewu ewu Mmemme mmemme kwa afọ n'abalị ụnyaahụ.
kacha mma na-acha ọcha t-uwe elu
BEVERLY HILLS, CA - SEPTEMBER 27: Onye na -eme ihe nkiri Kiernan Shipka rutere Teen Vogue Ememme ncheta afọ iri nke ndị ntorobịa Hollywood na Septemba 27, 2012 na Beverly Hills, California. (Foto nke Jason Merritt/Getty Images)
Ụmụ nwoke ndị isi mmebi Kiernan Shipka yi uwe mpe mpe mpe akwa mara mma nwere njigide odo odo na-acha odo odo, ụlọ dị ntụpọ, na braịdị Heidi.
BEVERLY HILLS, CA - SEPTEMBER 27: Onye na -eme ihe nkiri Hailee Steinfeld rutere Teen Vogue Ememme ncheta afọ iri nke ndị ntorobịa Hollywood na Septemba 27, 2012 na Beverly Hills, California. (Foto nke Jason Merritt/Getty Images)
Hailee Steinfeld nyere Louis Vuitton isi n'isi ruo n'isi. Ahụrụ m minaudiere ahụ dị mma n'anya ma lelee olu olu ahụ!
BEVERLY HILLS, CA - SEPTEMBER 27: Leslie Mann na Maude Apatow rutere na Teen Vogue 10th Annnual Young Hollywood Party na Septemba 27, 2012 na Beverly Hills, California. (Foto nke Steve Granitz/WireImage sere)
Leslie Mann na nwa ya nwanyị, Maude Apatow mara mma nke ukwuu ịghara itinye ha n'uwe e biri ebi na akpụkpọ ụkwụ Rodarte dabara.
billboard music awards 2017 kapeeti uhie
BEVERLY HILLS, CA - SEPTEMBER 27: Nikki Reed rutere na Teen Vogue 10th Annnual Young Hollywood Party na Septemba 27, 2012 na Beverly Hills, California. (Foto nke Steve Granitz/WireImage sere)
Nikki Reed gara ile anya mara mma nke nwere uwe mwụda nwere nnukwu blazer na-acha ọcha, jeans ojii na ikiri ụkwụ.
BEVERLY HILLS, CA - SEPTEMBER 27: Onye na -eme ihe nkiri Cody Horn rutere na Teen Vogue's 10th Annnual Young Hollywood Party na Septemba 27, 2012 na Beverly Hills, California. (Foto nke Jon Kopaloff/FilmMagic dere)
Cody Horn wee jiri LBD nwere eriri, akpụkpọ ụkwụ nkwonkwo ụkwụ, na ipigide were ihe were dị mfe.
Nwere ọkacha mmasị? ___
Kedu onye kacha yi uwe na oriri Teen Vogue Young Hollywood? __Gwa m onye ị tozuru oke na ihe kpatara na nkwupụta!
usoro ntutu ntutu dị mkpụmkpụ 2017
pixie ịkpụ n'ihu na azụ
ezigbo mma etemeete ahịhịa setịpụrụ